Akụkọ kachasị ọhụrụ gbasara Squad Federal Anti-Robbery si Nigeria & ụwa | TAA
Osimiri ugbo: APC kuru gomenti ike maka ebubo gọọmenti etiti mba ...
Home Tags Squad nke United States
Squad nke United States
Ndị ọrụ SARS maka usoro ọzụzụ ọhụrụ - HQ ndị uweojii
Ezubere usoro ọzụzụ ọhụrụ maka ndị uweojii na ndị uweojii Anti-Robbery Squad (SARS).
#ENDSARS: IGP Ibrahim Idris nyere iwu ka ndozi SARS
Onye isi nyocha nke ndị uweojii, Ibrahim Idris, enye iwu ka a malite ịhazi ndị uweojii na-ahụ maka mgbochi ndị uweojii na-esochi mkpuchi ọha megide ndị agha ahụ.
Otu onye agha na-agbakọta agha na-agwa ndị uweojii okwu banyere mwakpo a dọrọ ha
Onye isi ndi isi ulo nzuko nke Ogun, Yinka Mafe, kwuru na ya gwara onye oka iwu ya ka o guzobe iwu megide ndi uweojii na Naijiria, Ogun State Command maka ihe ebubo ebubo onwa Tuesday.
Ndị uweojii na-enyocha ndị ohi maka Lagos
Ndị uweojii ejidela ụfọdụ ndị na-egbu egbu na-ekwu na ha na-agbagha ma na-apụnara ndị bi na Elere, Agege na Lagos State.
A na-enyo ndị uweojii anya igbu onye Gwen Ultimate Search winner
Lagos State Police Anti-Robbery Squad (FSARS) ejidewo otu Ismaila Adeyemi, 49, n'ihi na a sịrị na ọ na-egbu 2007 onye mmeri nke Gulder Ultimate Search, Hector Jobateh.
Gọọmenti etiti ga-amalite usoro nkwụsị nke mmanụ ndị a na-ahụ maka mmanụ na Oregon n'August, Marvin Dekil, onye na-ahụ maka ọrụ nchịkwa nke Hydrocarbon and Remediation Project (HYPREP), kwuru.
José Mourinho: M ga-azụ ahịa Manchester derby merie maka Nkọwa Njikọ
José Mourinho kwetara na ọ ga - eme ka Manchester City bụrụ oriri pụrụ iche - ma onye njikwa Manchester United ga - azụ ahịa ahụ maka mbido Premier League.
Russia: Syria ikpuchi ikuku ikpuchire 71 missiles
Otu onye isi agha Russia bụ onye agha na-ekwu na nchebe elu ikuku nke Siria agbachila ma ọ dịkarịa ala ngwá agha ndị na-agba ụgbọ mmiri 71 nke ndị agha United States, UK na France chụpụrụ.
Nwa nwoke 57 dị afọ 10 maka mkpọrọ maka ịzụ ụmụ mmadụ
Pierre-Emerick Aubameyang na nso nso Arsenal - - akuko
Ndị ikpe ikpe nke ụlọ ikpe na-ekpe ikpe ikpe na-egbu ndị omekome
Syria nyeghachi aka n'enye onyinye nke US 'ohu' France
Arsene Wenger: VAR snub na - etinye Premier League 'n'azụ ụwa'
Gọvanọ Obaseki kwadoro na Odighi, Odiguetue obodo, gburugburu